Tayo Sare Jumlada carboxymethyl cellulose cmc qiimaha budada Soo -saaraha iyo Bixiyaha | Zhuoer
Jumlada carboxymethyl cellulose cmc qiimaha budada
CAS Maya .: 9004-32-4
Carboxymethyl cellulose (CMC) ama xanjo cellulose waa deris cellulose oo leh kooxaha carboxymethyl (-CH2-COOH) oo ku xidhan qaar ka mid ah kooxaha hydroxyl ee monomers glucopyranose oo ka kooban laf-dhabarka cellulose. Waxaa badanaa loo isticmaalaa cusbada soodhiyam, cellulose sodium carboxymethyl.
CMC waxaa loo adeegsadaa cuntada hoos timaada E lambarka E466 sidii wax -ka -beddelka is -beddelka ama dhumucdiis, iyo in la dejiyo emulsions ee alaabooyin kala duwan oo ay ku jiraan jalaatada. Sidoo kale waa qayb ka mid ah alaabooyin badan oo aan cuntada ahayn, sida daawada cadayga, caloosha jilciya, kaniiniyada cuntada, rinjiga biyaha ku salaysan, saabuunta, qiyaasta dharka, iyo alaabada waraaqaha kala duwan.
CMC waxaa loo adeegsadaa cuntada hoos timaada E lambarka E466 sidii wax -ka -beddelka is -beddelka ama dhumucdiis, iyo in la dejiyo emulsions ee alaabooyin kala duwan oo ay ku jiraan jalaatada. Sidoo kale waa qayb ka mid ah badeecooyin badan oo aan cuntada ahayn, sida daawada cadayga, caloosha jilciya, kiniinnada cuntada, rinjiga biyaha ku salaysan, saabuunta, qiyaasta dharka, iyo alaabada waraaqaha ee kala duwan.
Magacyo kale: carboxymethyl cellulose
Xidhmada: 25kg halkii kiish
Shayga Heerka Natiijooyinka
Muuqaal Budo cad ama huruud ah waafaqsan
Viscosity, cps (2% xalka biyaha, 25 ° C, Brookfield), mpa.s 800 ~ 1200 1135
Luminta qalajinta, % ≤10 6.8
Qiimaha PH (1% xal) 6.0 ~ 8.5 7.6
DS ≥0.9 0.92
Cabbirka walxaha, (ilaa 80 mesh), % ≥95.0 98.5
Birta culus (sida Pb), % ≤0.0015 <0.0015
Bir (sida Fe), % ≤0.02 <0.02
Arsenic (sida As), % ≤0.0002 <0.0002
Macdanta (Pb), % ≤0.0005 <0.0005
Caanaha & caaryada, (cfu/g) ≤100 <100
Salmonella, (/25g) Xun Xun
1. Heerka cuntada: waxaa loo isticmaalaa cabitaannada caanaha iyo xawaashyada, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa jalaatada, roodhida, keegga, buskudka, baastada degdegga ah iyo cuntada dhejiska degdegga ah. CMC waxay dhumucdi kartaa, xasilin kartaa, hagaajin kartaa dhadhanka, haynta biyaha iyo xoojinta adkaysiga.
2. Darajada Cosmetics -ka: waxaa loo isticmaalaa saabuunta iyo saabuunta, dhejiska ilkaha, kareemka qoyaanka, shaambo, timo hagaajiye iwm.
3. Darajada dhoobada: usde ee jirka dhoobada, dhaldhalaalka dhalada iyo qurxinta dhaldhalaalka.
4. Heerka qodista saliidda: Si baaxad leh ayaa loogu adeegsadaa dareeraha dillaaca, dheecaanka qodista iyo dheecaanka sibidhka si fiican u noqda xakamaynta luminta dareeraha iyo takifier. Waxay ilaalin kartaa derbiga usheeda dhexe waxayna ka hortagi kartaa luminta dhoobada sidaasna waxay kor u qaadeysaa waxtarka soo kabashada.
5. Darajada rinjiga: Rinjiyeynta iyo dahaarka.
7. Codsi kale: Darajada warqadda, darajada macdanta, xanjada, fooxa gariiradda kaneecada, tubaakada, alxanka korontada, baytariga iyo kuwa kale.
Sideen u qaataa 1-Methylimidazole?
25kg halkii kiish, ama sidaad u baahan tahay.
Hore: Sahayda warshadda 99% 1-Methylimidazole CAS 616-47-7 oo leh qiimo wanaagsan
Xiga: Ilaaliyeyaasha Cuntada FCCIV 99% Potassium Sorbate Granular E202
qiimaha budada cmc